रुपा बुढाथोकी, दमक/ झापाको दमकमा एथ्रोस्कोपी प्रविधिबाट हाडजोर्नीको उपचार शुरु भएको छ । दमकको एड्भान्स अस्पतालमा डा. अनुप पोखरेल नेतृत्वको टोलीले यो सेवा शुरु गरेको हो । यो प्रविधिबाट लेटरको माध्यमबाट उपचार गरिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरि उच्चस्तरीय उपचार सेवा शुरु गरेको डाक्टर पोखरेलले बताए । यो प्राविधि दमकमा पहिलो पटक भित्रिएको दाबी उनको छ । यसरी उपचार गर्दा छिटो र प्रभावकारी देखिने उनको भनाइ छ ।
यसै प्रबिधिको प्रयोग गर्दै अस्पतालका हाड जोर्नि तथा नशा रोग बिषेसज्ञ डा. अनुप पोखरेलको टिमले जटिल खालको सल्यक्रिया सफल पारेको छ । झापा शिवसताक्षी नगरपालीका वडा नम्बर ६ शिवगञ्जका बिनोद यादवको हिपको जोर्निको सल्यक्रिया गरीएको हो । कम्मरका दुवै भागमा रहेको जोर्नि को नशा फुटेर सुकिसकेको अवस्थामा उपचारका लागी आएका यादवको सल्यक्रिया मार्फत जोर्नि फेरीएको अस्पतालका हाड जोर्नि तथा नशारोग बिषेशज्ञ डा. पोखरेलले बताए ।।
अत्यधिक मादक पदार्थ सेवनका कारण नशा फुटेर यादवको जोर्नि मरेको थियो । जोर्निको हड्डी सुकेर खुट्टानै छोटो भईसकेको अवस्थामा सल्यक्रिया गरी अहिले सामान्य अवस्थामा ल्याईएको डा. पोखरेलले बताए । ४० बर्षकै उमेरमा हिँडडुल गर्न नसक्ने भएका यादवलाई अहिले उपचार पछि सामान्य अवस्थामा ल्याईएको छ । उनले अब निको भईसकेपछि अन्य सामान्य व्यक्ति सरह काम गर्न सक्ने डा. पोखरेलले बताए । यो सल्यक्रिया धरानको घोपा क्याम्पमा गरिने भए पनि प्रदेश १ का निजि अस्पतालहरुका लागी नौलो भएको उनले बताए ।
सल्यक्रिया गरेको तिनदिनमै आज हिँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बिरामी यादवले बताए । उठ बस गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अफुलाई डा. पोखरेलले नयाँ जिवन दिएको यादवको भनाइ छ ।